यस वर्षको प्रदर्शनी मेलामा दर्शकले पाइला पाइलामा फरक पाउनु हुनेछ : क्यान अध्यक्ष बास्तोला
इटहरी : कम्प्युटर व्यवसायीहरुको छाता संगठन क्यान इन्फोटेक सुनसरीको आयोजनामा यहि माघ १ गतेबाट इटहरी स्थित जनता विद्यालयको खेल मैदानमा प्रदर्शनी मेला आयोजना हुदैँछ । यस मेलाबाट ग्राहकले के के कुराको अवलोकन गर्न पाउँछन् या यस मेला लगाउनुको अर्थ के तगायत अन्य विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीले कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) सुनसरीका अध्यक्ष बिशाल बास्तोला सगँ छोटो कुराकानी गरेका छौँ ।
शुरुका क्यानको अर्थ वा यो भनेको के हो ?
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) पहिला आआफ्नो जिल्लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गरेर चलाइएको संस्था थियो भने २०७२ सालमा क्यान महासङघ गठन भयो । जुन अहिले कम्प्युटर ब्यबसायी, आइटि प्रोफेसनल, वा आइटि विशेषज्ञ सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था हो । सबै अहिले महासङ्घमा आबद्ध भएर सञ्चालन हुने संस्था हो ।
इटहरीमा प्रदेश स्तरीय इन्फोटेक प्रदर्शनी मेला सुरु हुदैछ, यस बिषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु न ?
प्रबिधिमा नयाँ के आको छ, त्यसलाई प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ हो । एक प्रकारले भन्दा कम्प्युटर व्यबसायी आइटि प्रोफेसनल, तथा आइटि बिज्ञहरुको भेला हुने ठाउँ हो । ग्राहकहरुले पसलमा नपाउनु भएको बिभिन्न प्रबिधिमा आधारित बस्तु किनमेल गर्ने स्थल पनि हो । नेपालमा धेरै प्रोफेसनल ब्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले प्रबिधिमा आधारित के कस्ता कार्य गरि रहनु भएको छ वा के गरि सक्नु भयो जस्ता कार्यको जानकारी पाउनु हुनेछ, साथै स्थानीयबासि, बिद्यार्थी गरेका प्र्रबिधि यूक्त सामान पनि त्यस मेलामा राखिने भएकाले यो मेला सबैका लागि सार्थक छ ।
यसपालिको पनि गत सालको जस्तै मेला हो या केही फरक रहन्छ ?
अलिक फरक नै पाउनु हुन्छ, पाइला पाइलामा फरक पाउनु हुन्छ । तयारी पनि त्यहि अनुसार गरेका छौ, बिद्यार्थीका प्रोजेक्टहरु,स्पेसियल गेमिङ जोन,जो प्रबिधिमा इच्छुक हुनुहुन्छ वा बिद्यालय, अफिसमा प्रबिधिका सामान जोडिएका छन् तर उहाँहरुलाई चलाउन आउँदैन त्यस्ता ब्यक्तिहरुका लागि तालिममा सहभागि हुनका लागि एउटा कोठाको ब्याबस्था गरेका छौ ।
धेरै ब्यक्तिहरुले यस मेलालाई ब्यापारिक मेला मात्र भयो भन्ने गरेका छन् के यो सत्य हो ?
यो एक त ब्यापार हो, नयाँ सिकाई हो, जिज्ञासा पैदा गर्ने माध्यम हो ,आइटि क्षेत्रमा लागेका मानिसहरुको हौसला बिकास गर्ने माध्यम पनि हो, पुरै ब्यापारिक भन्न मिल्दैन ।
यस मेलामा कहाँबाट आर्थिक सहयोग जुटाउनु भएको छ ?
यो मेलामा लाग्ने लागत हामीले यस बर्ष काहिँ पनि सहयोग नमाग्ने निर्णय गरौँ । यो प्रर्दशनी मेलाबाट जति आयआर्जन हुन्छ,त्यहि रकमबाट खर्च धान्ने सोच बनाएका छौ ।
यस प्रदर्शनि मेला मुख्य आकर्षणको केन्द्रका रुपमा के राख्नु भएको छ ?
मुख्य त रोर्बट राखेका छौं त्यो पनि दुई प्रकारको छ, एउटा रोबोट वार र अर्काे रोबोट रेस राखेका छौ, रोबोट वार भनेको दुईवटा रोबोट एक अर्कामा जुधेर युद्ध गर्ने खालको हो भने, राबोट रेस एक अर्का बिच दौडिन लगाउँछौ । त्यसैगरी मेलामा ड्रोन, उड्ने रकेट, नयाँ गेमिङ के आको छ, नयाँ एडिटिङको लागि के आको छ , र्र्याम कस्तो आको छ लगायत अन्य कुराले यस मेलालाई आकर्षण गर्ने छ ।
तयारी पुरा भई सक्यो ?
केही रुपमा स्टल आउने क्रममा जारी छ लगभग तयारी पुरा भई सक्यो ।
अब अन्तिम आम ग्राहक,दर्शक तथा अन्य ब्यक्तिहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
मैले धेरै कुरा माथि उल्लेख गरि सके, यो मेला गत बर्षको भन्दा बिल्कुलै फरक हुनेछ । एक पटक प्रदर्शनी मेलामा आई दिएर जे देख्नु हुन्छ सत्य तथ्य रुपमा सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।